Interview with शिव मुखिया
पप गायक शिव मुखिया चलचित्र निर्माण गर्न चाहन्छन - शिव मुखिया
सिन्धुलीमा जन्मेका, पुर्खौली घर दोलखा हाँबाका शिव मुखिया चार बर्षको उमेर देखि काठमान्डूमा हुर्की बढेका हुन् । बाल्यकालदेखि गायन र कला सृजनाको विविध पक्षमा रुचि राख्ने र खुबी भएका शिवले राजधानीबाटै सांगीतिक यात्राको शिखर उग्लन सफल भएका छन् ।
सिन्धुलीमा जन्मेका, पुर्खौली घर दोलखा हाँबाका शिव मुखिया चार बर्षको उमेर देखि काठमान्डूमा हुर्की बढेका हुन् । बाल्यकालदेखि गायन र कला सृजनाको विविध पक्षमा रुचि राख्ने र खुबी भएका शिवले राजधानीबाटै सांगीतिक यात्राको शिखर उग्लन सफल भएका छन् । शिव मुखिया (शिव सुनुवार)को सांगीतिक यात्राको २५औ वसन्त विभिन्न आरोह आबरोह छिचोल्दै पूर्ण भएको छ । द एक्स ब्याण्डका सुप्रसिद्ध पप गायक शिवले २२ बर्षदेखी निरन्तर उक्त ब्यान्डको अग्रणी पंतिमा रहेर कला र संगीतको कर्मले नेपाली संगीत जगतलाई हराबरा पारि रहेका छन् । सांगीतिक यात्राको क्रममा विभिन्न मुलुक पुगी सकेका तर बेलायतमा भने पहिलो पटक द एक्स ब्याण्ड युके टुर २०१५का लागि, B13 को आयोजनामा गत १६ मार्चमा बेलायत आइ पुगेका हुन् । चर्चित पप स्टार शिव मुखिया एक सफल गायक मात्र नभयर सफल संगीतकार, गीतकार पनि हुन् भने रेकर्डिङ्ग, मिक्सिङ्ग, माष्टरिङ्ग आदि सबै काम, आफै गर्ने बहु प्रतिभाशाली व्यक्तित्व भएका कलाकार पनि हुन् । उनले ५०० भन्दा बढी गितहरुमा संगीत भरि सकेका छन् र १००० भन्दा बढी गीतहरुमा संगीत समायोजन गरि सकेका छन् ! देशको चर्चित गायक गायिकाहरुको स्वरमा संगीत भरिसकेका उनको आफ्नै निजि अटोमेटिक साउण्ड नामको म्युजिक स्टुडिया पनि छ । उनको सुरुको अल्बम "फर्केर हेर्दा" श्राताहरूले त्यती नरूचाय पनि हार नमानेर निरन्तर आफ्नो सांगीतिक यात्रालाई जारि राखे । धैर्य र मेहनतको फलस्वरुप आज उनि आफ्नो लक्षमा पुग्न सफल भएका छन् ! फर्केरा हेर्दा अल्बमलाई दोस्रो पटक बनाउदा सफलताको खुड्किला चड्न थालेका शिव मुखियाको भड़ास जस्तो चर्चित अल्बम सम्म आइ पुग्दा निकै माथि शिखर चुम्न आज उनि सफल भएका छन् ।
परिष्कृत - कस्तो लाग्यो त बेलायत ?
शिव मुखिया - चिसॊ अति रहेछ ,मौसमको कुनै ठेगान नहुदो रहेछ ।
परिष्कृत - द एक्स ब्यान्डको बारेमा बताई दिनुस न ।
शिव मुखिया - नेपाली पप सङ्गीत प्रति समर्पित भएर सन् १९९३ ताका "द एक्स ब्यान्ड"को स्थापना गरेका हौ म र मेरो टीमले, म्युजिक, रेकर्डिङ्ग ,मिक्सिङ्ग, माष्टरिङ्ग देखि प्रोडक्सन सबै द एक्स ब्यान्डले नै गर्ने गरेको छ र अहिले सम्म यति लामो समय टिकेर निरन्तर चलि रहेको ब्याण्ड पनि हो यो ।
परिष्कृत - द एक्स ब्यान्डको टीममा अरु को को हुनुहुन्छ ?
शिव मुखिया - द एक्स ब्याण्डलाई म र मेरो ड्रमर शुरेन्द्र श्रेष्ठजी मिलेर खोलेका हौ र टीममा गिटारिष्ट सजल राजभन्डारीजी पनि हुनुहुन्छ । जम्मा हामी तीन जना मात्र छौ यो सांगीतिक टीममा र तीन जना मात्र भएको ब्याण्ड समूह पनि द एक्स ब्याण्ड मात्र हो नेपालमा ।
परिष्कृत - UK Tour 2015 को बिचार कसरि आयो ?
शिव मुखिया - यो बिचार हाम्रो टीमको हैन, देश देखि विदेश सम्म हाम्रो स्रोता दर्शकबाट हामीलाई प्रशस्तै माया मिलेको छ । उहाँहरुको चाहना अनुरुप आयोजकहरुले पटक पटक मौका दिनु हुन्छ बिदेशमा पुगेर नेपाली गीत संगीत प्रस्तुत गर्नलाई ।
परिष्कृत - बेलायत कसको आयोजनामा द एक्स ब्यान्डको प्रस्तुति लिएर आउनु भएको त ?
शिव मुखिया - बेलायत स्थित रेडिर्ङ्गमा नेपाली युवा समुहले खोलेको (B13 बाजा १३) नामक इभेन्ट समूह छ र यो समुहले गीत संगीतको अलावा विभिन्न खेलकुदहरु र अन्य थुप्रै प्रकारका कार्यक्रमहरुको इभेन्ट गर्ने गर्छ, सोहि इभेन्ट समूह (B13को आयोजनामा UK Tour 2015 लिएर आएको हो द एक्स ब्याण्ड ।
परिष्कृत - गायनमा पप गीतलाई नै रोज्नुको उद्देश्य ?
शिव मुखिया - म आठ नौ कक्षामा पढ्दा रेडियो नेपालमा बासुरी बाधक थिए । त्यो बेला नै पनि नेपालमा पप गीत संगीतले चर्चा पाएको थियो । मेरो आफ्नो पनि सौख भएकोले बासुरिबाट ड्रम र गिटार समात्न पुगे बस त्यसपछि जुन बाटोमा यात्रा गरियो निरन्तर गरिदै छ खुशी र आनन्दको साथमा ।
परिष्कृत - तपार्इको पहिलो गीति एल्बम र पहिलो पटक गाएको गीत कुन होला ?
शिव मुखिया - मेरो पहिलो गीति अल्बम "फर्केर हेर्दा" हो र "पल्लो डाडामा बसेकी कान्छी" मैले पहिलो पटक गाएको गीत हो ।
परिष्कृत - हाल सम्म कति संख्यामा गीत गाइ सक्नु भएको छ ?
शिव मुखिया - मेरो आफ्नो छ वटा अल्बम बाहेक अन्य थुप्रै नेपालको भाषा भाषीहरुमा गीत गाएको छु ।
परिष्कृत - तपार्इले गायनको साथ् साथै गीत रचना, संगीत, रेकर्डिङ्ग, मिक्सिंग, माष्टरिंग, प्रोडक्शन आदि सबै आफैले गर्नुहुदे रहेछ, यी सबै कलाको पक्षमा आफूलाई केमा अब्बल छु जस्तो लाग्छ ?
शिव मुखिया - मलार्इ रेकर्डिङ्ग गर्दा बढी आनन्द लाग्छ यद्धपि सबै पक्षमा म खुबै इन्जेयफुल भयर काम गर्न रुचि लाग्छ ।
परिष्कृत - तपार्इले गाएका गीतहरु मद्ध्य हिट भएका गीत कुनकुन होलान ?
शिव मुखिया - देखे तिमीलाई हिजै राति सपनीमा, पल्लो डाडामा बसेकी कान्छी, लुक्न देउ मलाइ तिम्रो केशमा, ठाडो जाने उकालो, म आउदै छु, तिम्रो नजरले, प्रया सधै, कहिलेकाही तिमि, सिमाना, हाम्रो नेपाल, एउटा चिठ्ठीको सहाराले, च्यङ्बा दाइ आदि स्रेताहरूले धेरै मा पराएका गीतहरू हुन ।
परिष्कृत - तपार्इलार्इ आफुले गाएका गीत मध्ये सबै भन्दा बढी मन पर्ने गित कुन हो ?
शिव मुखिया - फर्केर हेर्दा अनि सबै प्यारो नै लाग्छ आफ्नो सृजनाहरु ।
परिष्कृत - गीत संगीत सबन्धि बिशेष अध्यान, कुनै प्रशिक्षण लिनु भएको छ कि ?
शिव मुखिया - मैले ड्रम, गिटार, भोकल, साउन्ड र अन्य प्राबिधिक पक्षमा प्रशिक्षण लिएको छु, कति देश भत्रै र कति कुरा मुम्बई गएर पनि अध्यान गरेको हुँ ।
परिष्कृत -तपार्इ गायक मात्र नभएर संगीतकार पनि हुनुहुन्छ, हाल सम्ममा कति संख्यामा संगीत भर्नु भएको छ आफ्नो र अरुको आवाजको गीतहरुमा ?
शिव मुखिया - मैले १००० भन्दा बढी संख्यामा संगीत भरि सकेको छु र ५०० भन्दा बढी संख्यामा संगीत समायोजना गरि सकेको छु । नेपालको चर्चित ९९ प्रतिशत गायकहरुको आवाजमा संगीत भर्ने मौका पाएको छु । यसको अलावा मैले आफ्नो मात्री भाषा सुनुवार भाषाको गीत र अन्य थुप्रै नेपाली आदिबासी जनजातिहरुको मातृ भाषामा गीत गाएको छु ,संगीत भरेको छु ।
परिष्कृत - तपार्इले गाएको गित सिमाना विवादमा मुछियो भन्ने हल्ला छ खास के होला ?
शिव मुखिया - सिमाना गीत मार्फत मैले यथार्थ चित्रण गर्ने जमर्को गरेको छु, भारतको सिमानासंग जोडिएको हाम्रो भूमिलाई लिएर । कुरा सिधै अनुमान लगाउन सक्छन सबैले आखिर किन सिमाना गीतलाई नेशनल मिडियाले बज्न बन्देज लगायो र कसको इशारामा भनेर ।
परिष्कृत -यो सिमाना गीतकै बिषयमा मिडियामा तपार्इले अन्तर्वार्ता दिनु भएको थियो कि ?
शिव मुखिया - एन टिभीबाट अन्तर्वार्ता दिने क्रममा मैले लाइभ दिदै थिए गितार बजाउदै गीतको चार लाइन गाउने बित्तिकै अचानक ढ्याक्क रोकियो । जसको आवाज बाहिर भिवरहरुले समेत सुनेछन । मेरो सबै खाले अन्तर्वार्ताहरू युट्युवमा पाउन सकिन्छ तर यहि सिमाना गीत सम्बन्धि जोडिएको अन्तर्वार्ता कहि पनि राखिएके छैन ।
परिष्कृत - त्यसो भए अब हामीले सिमाना गीत सुन्न सकिदैन होला ?
शिव मुखिया - नेशनल मिडियाबाट बजेको छैन तर एक दिन अवश्य बज्ने छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु । निजि एफ एमबाट त बजी नै रहेको छ ।
परिष्कृत - अरु कुनै नयाँ योजना बुन्दै हुनुहुन्छ की कला र सृजनाको क्षेत्रमा ?
शिव मुखिया - म मुभी मेकिङ्ग सम्बन्धि अध्यन र प्रशिक्षण पनि लिदै छु । भविष्यमा नेपालको आदिबासी जनाजातिहरुको कथाबस्तुमा आधारित चलचित्रहरु बनाउन चाहन्छु । हाम्रो देश विभिद भाषा संस्कृतिले परिपूर्ण छ र ति अत्यन्त पृथक छन् ,अतुलनिय छन्, सुन्दर छन् । म तिनलाई चलचित्रको माध्यामबाट, आदिबासी जनाजातिहरुको पहिचानलाई अन्तराष्ट्रिय स्तर सम्म पुराउन चाहान्छु । ओस्कारको लागि नोमिनेसन हुने स्तर दिएर मेहनत गर्ने अभिलाषा साँचेको छु ।
परिष्कृत - तपार्इ एक किराँती पुत्र सुनुवार हुनुहुन्छ । तपाईसंग पनि आफ्नै मातृभाषा छ मौलिक संस्कृति छ । के आफ्नो कोर्इच लो (सुनुवारी भाषा)मा पनि चलचित्र निर्माण गर्ने बिचार लिनु भएको छ ?
शिव मुखिया - निश्चय नै! आफ्नो मातृ भाषामा पनि चलचित्र निर्माण गर्ने सोच छ, जसको निम्ति म कोइंच सुनुवार संस्कृति सम्बन्धि बिगत ६ बर्षदेखी अध्यान गर्दै छु । हालमा कथा तयार हुदै छ पत्रकार तथा कोइंच सुनुवार साहित्यकार उत्तम कुमार कातिच द्वारा, अनि अरु काम गीतकै नयाँ भिडियोहरु पनि बनाउने तयारीमा जुटिरहेको छु ।
परिष्कृत - हाल सम्म कति वटा मुलुक पुग्नु भयो सांगीतिक यात्राको सिलसिलामा ?
शिव मुखिया - अष्ट्रेलिया, जापान, हंगकंग, कोरिया, फ्रान्स, दुबई आदि मुलुकमा पुगियो प्राय दोहोराएर स्रोता दर्शकहरुको चाहानामा ।
परिष्कृत - तपार्इको गीतमा स्राता दर्शकको कस्तो सहभागिता रहेको छ ?
शिव मुखिया - मलार्इ यो यात्रामा अनबरत हिड्न साथ् र साहस मनग्य मिलेको छ, दर्शक र स्रेताहरुकै माया र हौसलाले गर्दा र म यो २५ बर्षको सांगीतिक यात्रा सम्म मजाले टिकी रहना सफल भएको छु . जसको श्रेय मेरो तमाम दर्शक बर्गलाई जान्छ ।
परिष्कृत - हाल बेलायतमा कुन कुन ठाँउमा कार्यक्रम गर्नु भयो र विदेशको भूमिमा नेपालि गीत संगीत प्रस्तुत गर्दा कस्तो महसुस गर्नु भएको छ ?
शिव मुखिया - फान्ब्रोरोमा गरियो पहिलो पटक र अबको प्रस्तुति अक्सफाेर्ड र लण्डनमा हुदै छ । टिकट सेलिंग निकै राम्रो भर्इ रहेको जानकारी आइ रहेछ मेसेजेजहरुमा । दर्शकहरुको सहभागिता जुन मुलुकमा पुगे पनि उत्तिकै उत्साहजनक पाएको छु । यहि कारणले मन गर्वित हुन्छ जहाँ बसे पनि हामी आफ्नो नेपाललाई माया गरेका हुन्छै, आफ्नोपनमा बाँचेका हुदाँरहेछौ अनि भन्न मन लाग्छ देश चित्रमा हैन भित्र हुदो रैछ ।
परिष्कृत - अबको सांगीतिक यात्राको तयारि कुन मुलुकको लागि गर्दै हुनुहुन्छ ?
शिव मुखिया - अष्ट्रेलिया, फ्रान्स अनि अरु ठाँउबाट पनि कुरा आइरहेछ ।
परिष्कृत - आफ्नो थप भनाइ जोड्दै केहि भन्न चाहनु हुन्छकी ?
शिव मुखिया - हामी नेपाली जुन मुलुकमा बसे पनि नेपालि गीत संगीतलाई,कलाकारहरुलाई माया गर्नु होला, हामी कलाकार भनेकै स्रोता तथा दर्शकहरुको मायाले बाच्ने हो । देशलाई नबिर्सनुहोला भुलबसपनि नत्र पाप लाग्छ आफ्नो मुलुकको आफ्नो आमाको । आयोजक बी१३का साथीहरुलाई र सम्पूर्ण बेलायतबासी नेपाली स्रोता दर्शक महानुभावहरुलाई हार्दिक धन्यबाद भन्न चाहान्छु माया र साथको निम्ति । अर्को बर्ष पनि हामी फेरि यसरि नै भेट्ने छौ नयाँ र नौलो प्रस्तुतिको साथमा । आउदै गरेको नेपालि नया बर्ष २०७२ को मंगलमय शुभकामना ।।
Views : 1903 | Date : 2015-03-31